Sales & Services - Shanghai Nitsangana Tamin'ny Maty Co., Ltd
400 Customer Service foibe
ny 400 mpanjifa foibe dia zaraina ho vaovao fifandraisana foibe, mifantoka hanatsara mpanjifa fahafaham-po, mpanjifa ny fitondran-tena fanadihadiana foibe, ary ny vokatra-barotra foibe, izay manome anareo amin'ny matihanina asa anisan'izany ny fanompoana foibe vaovao, vidin'ny fizahana, fanohanana ara-teknika, vokatra fitarainana, fanamboarana sy ny piesy fanontaniana, sy ny fanohanana ny varotra.
Nandritra ny mpampiasa traikefa andro maka tanteraka ny fotoana hampiditra vokatra vaovao, ary hanatanteraka asa traikefa azo ampiharina mpanjifa, hanampy anao hahatakatra tsara kokoa XCMG, ary hanome anareo amin'ny fanorenana namboarina manokana vahaolana.
Te-handray anjara amin'ny fampiofanana ny miavaka orinasa matihanina, ka nafana fo erỳ isika fanorenana ny mpandraharaha fanofanana fototra, mpanohana ny National manainga Fifaninanana fahaiza-manao sy ny Concrete Design Competition, ary hampiroborobo ny fiaraha-miasa mavitrika amin'ny fanorenana orinasa.
Private namboarina Construction Solutions
Manana fitaovana ny rindrambaiko sy ny harena ary koa ny taona ny fanorenana traikefa ilaina mba hanome anao mahomby sy tena namboarina fanorenana vahaolana. Ho faly mihaino misy ny vokatra famolavolana, orinasa mpamokatra entana, na ny fanompoana hevitra mandritra ny dingana midinika.
ny fangatahana ho an'ny fanorenana ho samihafa eo lalandava, ary tsy hiantra ezaka amin'ny fanampiana anao ny mifidy ny tsara fitaovana, ary hahatsapa ny tandrify ny fitaovana ilaina ny hividy ianao.
Iray-Services ara-bola intsony
Miorina amin'ny fahatakarana lalina ny injeniera milina mpanjifa vokatra sy ny zavatra ilaina, dia miara-miasa amin'ny fikambanana ara-bola lehibe mba hanome ny raharaham-barotra amin'ny vahaolana tsara indrindra bola.
Mba hitsena ny rehetra ilainy, dia manome ny asa fanompoana matihanina fanaterana fitaterana sy ny fanofanana asa fanompoana ho an'ny fametrahana voalohany amin'ny tapa-milina rehetra.
365 × 24 taona-manodidina Service
ankapobeny, dia manana mihoatra ny 5000 sy 1500 fanompoana injeniera fanompoana fanoloran-tena fiara. Isika nanao ny taona fihodinana 24-ora fanompoana na dia nandritra ny fialan-tsasatra, mifanaraka amin'ny politika ny foana ny manome "ny valiny ao anatin'ny 15 minitra sy ny asa vita tao anatin'ny 24 ora."
izahay nanorina tonga lafatra GPS Global Service Center, ary afaka manome anao ny tompon'andraikitra voalohany mpitondra kapoaka marani-tsaina ny rafitra amin'ny alalan'ny Internet-javatra sehatra.
Iantrao Parts Rehefa Mila Izany
Manana an'arivony manerana piesy dia mifantoka kaontinanta dimy ny tahiry efa ho 1 lavitrisa piesy manam-pahaizana manokana. Mampanantena isika fa ny piesy dia ho voavonjy ao anatin'ny 72 ora.
Rehefa-tsena fanahiana-maimaim-poana Service
isika ny hanao izay fanomezana aorian'ny-tsena tolotra, anisan'izany Rentals, fiara faharoa-tanana evaluations, varotra-ins, overhauls, sy ny fanodinana. Tsy mifikitra foana ny andraikitra sy ny asa nanirahana ny manazava ny olana araka izay tsara indrindra vitantsika.
Manana "manam-pahaizana momba mpanjifa---fanorenana orinasa"-efatra sy ny fomba fiaraha-miasa fifanakalozana sehatra, miaraka amin'ny feo sy ny rafitra fitantanana ny asa mikoriana.